Ynaros Fallin ': Shaman Board Game muna 2022 paKickstarter - Gamepoint - Bhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 9, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Nehurongwa hwebhodhi mutambo Ynaros Fallin ', muparidzi mudiki Peekwik Zviroto anoda kuzadzisa chinangwa chake chekutanga chirongwa kuburikidza nekuwanda mari gore rino risati rapera. Kutanga kwemushandirapamwe wemari unoenderana wakarongerwa 2022, asi haisati yatarwa zuva.
Peekwik Dreams inoronga kutanga gore rino. Ynaros Fallin 'haisi chete yekutanga Kickstarter purojekiti yeiyo micro-muparidzi, asi yayo yekutanga bhodhi mutambo zvachose. "Ita kuti zviroto zviitike" ndiwo motto yakaziviswa nemuparidzi - kuita kuti zviroto zviitike. Izvo zvichashanda ne shaman duel Ynaros Fallin '? Chekutanga, vateveri vanozvisarudzira - vanofanirwa kubudirira kuunza zita racho kuburikidza neruzhinji rwemari.
Ynaros Fallin' - ari ega kana mune duel
Peekwik Dreams iri kuronga kuparura chirongwa ichi chegore rino - hazvizivikanwe kuti chichatanga rinhi chaizvo. Nharaunda parizvino iri kuvakwa kutenderedza bhodhi mutambo Ynaros Fallin '. the Crowdfunding preview peji paKickstarter yatova online, saka unogona kutotevera chirongwa ipapo. Vachangopfuura zana vanyoreri vanoratidza kufarira "bhodhi mutambo nezve epic hondo, masimba akavanzika uye kuongorora kwenyika dzemashiripiti".
Ynaros Fallin 'haisi chete debut kune mudiki muparidzi weItaly, zvakafanana zvinoshanda kune munyori Luca Sanfilippo nemumwe wake wekugadzira Ugo Tomasello. Iyo yekupedzisira zvakare ndiye musoro wePeekwik Dreams uye chaizvo chiremba weuroscience.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezveYnaros Fallin '. Zvimedu zvemashoko zvishoma zvinonzwika zvinofadza. Mutambo webhodhi wakanangana nevatambi vaviri vari mu duel modhi, asi zvakare unogona kuridzwa sezita rekuti wega. Matenderedzwa ane nguva dzekutamba anosvika awa imwe anonyanya kutaura nezve hunyanzvi uye musanganiswa wemuchina wekuiswa kwevashandi uye kutonga kwenzvimbo. Kutendeuka kwega kwega kune zvikamu zvina umo makadhi anoridzwa, mavara anofambiswa, matombo emashiripiti anotsinhaniswa kuti awane ruzivo uye zviwanikwa zvesimba zvinopera. Pane zvinhu zvina zvinogona kupedza mutambo. Pakupedzisira, mutambi ane mapoinzi ane ruzivo rwakanyanya kazhinji anohwina - kunze kwekunge paitika chimwe chemamiriro maviri anoita kuti mutambo ukundwe. Sezviri pachena, mutambo webhodhi unogona kutambwa pamatanho akasiyana ekuoma. Iyo Swiss Swan Keller ndiye ane mutoro wemifananidzo.
Pegasus Spiele 51896G - Spirit Island (chiGerman edition) * 49,99 EUR tenga
Kare Muroyi: Audio bhuku rakateedzana nezve muroyi Geralt
Inotevera Isu Taive Pano Nokusingaperi iri pano: kuburitswa kweiyo co-op puzzle mutambo
Kupera kwaAeon: Mutambo webhodhi wakawedzerwa nemutambo mutsva wepasi uye maviri maaddon
Just Dance 2021: Mwaka mutsva unobvumira vatambi kutamba ngano
Kufara muhoro yedhorobha: Ratinger Spieletage vanopemberera zuva ravo rekuzvarwa rechigumi